एम्सका विदेशी चिकित्सकलाई पनि निर्वाह भत्ताको माग गर्दै मोदीलाई पत्र- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
एम्सका विदेशी चिकित्सकलाई पनि निर्वाह भत्ताको माग गर्दै मोदीलाई पत्र
चैत्र २४, २०७६ सुरेशराज न्यौपाने
नयाँ दिल्ली — भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अल इण्डिया इन्च्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स)का चिकित्सकहरूले त्यहाँ अध्ययनरत विदेशी चिकित्सकहरूलाई स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) दिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
एम्स रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को महामारीले निम्त्याएको संकटका बेला निर्वाहभत्ता दिन माग गरेको हो ।
एसोसिएसनले भारतीय चिकित्सक सरह नै विदेशी चिकित्सकहरूसमेत स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर खटिरहेको हुँदा यस्तो बेलामा उनीहरूलाई आर्थिक र भावनात्मक दुवै हिसाबले साथ दिनुपर्ने भन्दै समान निर्वाह भत्ताको माग गरेका हुन् ।
‘विशेषगरी कोरोना महामारीविरुद्धको लडाईँमा संलग्नहरूलाई हरसम्भव सहयोग गर्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय हो, जसबाट अझ बढी प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि सहयोग मिल्छ,’ एसोसिएसनद्धारा मोदीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
विदेशी विद्यार्थीहरूले भारतीयसरह नै स्वास्थ्य सेवामा योगदान गरिरहेको हुँदा निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने संगठनको भनाई छ । साथै विदेशी भूमिमा रहे पनि अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना दैनिक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका साथै परिवारलाई समेत सहयोग बाध्यता रहेको समेत संगठनले पत्रमा लेखेको छ ।
हाल एम्समा ६५ जना भन्दा बढी नेपाली चिकित्सकहरू विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् । उनीहरूले विगत लामो समयदेखि भारतीय चिकित्सक सरह नै निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको माग सुनुवाई भएको छैन । जबकी भारत सरकारले दुई वर्षअघि नै निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । एम्सबाहेक चण्डीगढको पीजीआईएमईआर र पोडिचरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोष्टग्राजुएट मेडिकल एडुकेसन एण्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) मा अध्ययनरत नेपाली चिकित्सकहरूले पनि यही समस्या भोग्दै आएका थिए । लामो प्रयासपछि केही महिना अघिमात्र उनीहरूको निर्वाह भत्ता पाउने बाटो खुलेको थियो । तर, दिल्लीको एम्सले भने अझै त्यो सुविधा दिएको छैन ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा उनीहरूले भारतीय मुद्रा मासिक एक लाखसम्म पाउने छन् । तर, स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबैले होष्टलमा बस्ने र खाने लगायतको सबै खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्छ । त्यसका लागि मासिक रूपमा घरबाट खर्च मगाउनु पर्ने बाध्यता उनीहरूका सामू छ । जबकी उनीहरू ड्युटीमा लगातार २४ घन्टासम्म खट्ने गरेका छन् ।
निर्वाह भत्ताको विषयलाई नेपालले प्रधानमन्त्रीतहको वार्तामा समेत उठाइसकेको छ । र, भारतले त्यसमा सहमति पनि जनाइएसकेको छ । साथै दिल्ली आउने प्रायः सबैजसो स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग यो विषय उठाउँदै आएका छन् । तर, निर्वाह भत्ताको उल्झन अझै कायम छ । जबकी चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत एमडी-एमएस, डिएम-एमसीएच अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक रूपमा निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) दिने विश्वव्यापी प्रचलन छ । नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थीहरूले समेत मासिक रूपमा त्यस्तो भत्ता पाइरहेका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ ०७:३२
चैत्र २४, २०७६ प्रदेश ब्युरो
क्वारेन्टाइनमा बसेको १४ दिनसम्म संक्रमण देखिएन भने घर जान दिनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका छ । यस प्रदेशका क्वारेन्टाइनमा राखिएकामध्ये अधिकांशले आइतबार १४ दिन कटाएका छन् । उनीहरूलाई परीक्षणै नगरी घर जान दिने कि राखिराख्ने भन्ने दोधार रहेका बेला आइतबारै प्रदेश सरकारले थप एक साता राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू भने बित्थामा लामो समय दु:ख दिइएको भनेर आक्रोशित र चिन्तित छन् ।
प्रदेशले क्वारेन्टाइन अवधि एक साता लम्ब्याउने भने पनि डोटीका स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको घाँटीको स्वाब परीक्षण नगरी घर पठाउने भएका छन् । सबैको स्वाब परीक्षण सम्भव नरहेकाले उनीहरूको सामान्य शारीरिक जाँच गरेर पठाउने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए । ‘अहिलेसम्म कसैमा पनि कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘१५ औं दिनमा रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वास परीक्षण गरेर उनीहरूलाई घर पठाइन्छ ।’
डोटीमा आइतबार भारतलगायत बाहिरबाट आएका ४ सय ५० जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको १३ दिन भएको छ । उनीहरूलाई जिल्लाका २४ स्थानमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा राखिएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश मलासीले जानकारी दिए । ‘क्वारेन्टाइनको कार्यविधिमा स्वाब परीक्षण गर्ने उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘४ सय ५० मध्ये ४ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आयो ।’ क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइए पनि ७ दिनसम्म बेग्लै बस्ने सर्त राखिएको छ ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी हुँदै छ ?
सुदूरपश्चिममा देखिएका संक्रमितहरूको सम्पर्कमा गएकाहरूको जतिसक्दो चाँडो परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वास्थ्यकर्मीहरूले औंल्याएका छन् । यहाँ स्थानीयस्तरमै सरेको केस पनि फेला परेकाले जोखिम बढेको छ ।
प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्यकर्मीका दुइटा समिति परिचालित छन् । पहिलो केस इन्भेस्टिगेसन समिति र दोस्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ । कुनै व्यक्तिमा पोजेटिभ देखिने बित्तिकै केस इन्भेस्टिगेसनका प्रतिनिधिले उसको विस्तृत रिपोर्ट संकलन गर्छन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्डअनुसार संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री, सम्पर्क भएको स्थान र व्यक्तिहरूको विवरण पनि लिन्छौं,’ जनस्वास्थ्य निरीक्षक भूपेन्द्र महराले भने ।
केस इन्भेस्टिगेसन फर्मकै आधारमा कन्ट्याक्ट ट्ेरसिङ सुरु हुन्छ । ६ जना स्वास्थ्यकर्मीको समूह यस कार्यमा खटिएको छ । ‘केस इन्भेस्टिगेसनमा आएको सूचनाका आधारमा सम्बन्धित सबै व्यक्ति र स्थानसम्म पुग्छौं र उनीहरूको परीक्षणलगायतका काम अघि बढाउँछौं,’ यस कार्यको नेतृत्व गरिरहेका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक हेमराज जोशीले भने । उनका अनुसार शनिबार पहिचान भएका कैलालीका संक्रमित व्यक्ति गौरीफन्टा नाकामा हजार जनाको भीडमा रहेकाले अप्ठेरो छ । ‘तर उनी घर गएको र क्वारेन्टाइनमा बसेको सबै विवरण र उनीहरूको नमुना परीक्षण प्रकृया सुरु भएको छ,’ उनले भने ।
कञ्चनपुरमा ३४ को रिपोर्ट आयो
कोभिड–१९ का संक्रमित पहिचानका लागि सरकारले किटमार्फत द्रुत परीक्षण गर्ने निर्णय गरे पनि सुरु हुन दुई/तीन दिन लाग्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले बताएका छन् । ‘आज बिहानैदेखि फलो गरिरहेको छु,’ उनले भने । उनले हाल क्वारेन्टाइनमा रहेका र त्यसबाहेक अन्य शंकास्पद र संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको र्‍यापिड टेस्ट गरिने बताए ।
र्‍यापिड टेस्टबारे महाकाली अस्पतालका डाक्टरहरू पनि अन्योलमा छन् । सरकारले किटबाट टेस्ट गर्ने भने पनि कस्तो किट हो र कहिले आउने हो भन्ने विषयमा अलमल रहेको उनीहरूले बताए । ‘किटबाट टेस्ट गर्ने भनिएको छ तर त्यो कस्तो हो केही थाहा छैन,’ महाकाली अस्पतालका डा. सरोज आचार्यले भने, ‘संक्रमण दोस्रो चरणमा पुगिसकेपछि परीक्षणको दायरा बढाउनै पर्छ ।’
डा. आचार्यले क्वारेन्टाइनमा रहेका, रिपोर्ट पोजेटिभ आएका वा सम्भावित आउने व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका सबैको परीक्षण गरिने बताए । स्थानीय तहले शंकास्पद भनी पठाएका व्यक्तिको पनि परीक्षण गरिने उनले बताए ।
-धनगढीबाट अर्जुन शाह, कञ्चनपुरबाट भवानी भट्ट र डोटीबाट मोहन शाही
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ ०७:२८